पेशेवर पाइप फाइबर लेजर काटने मिसिन लेजर कटर - ACCURL लेजर
पेशेवर पाइप फाइबर लेजर काटने मिसिन लेजर कटर
लेजर बीम काटन मिसिन, उत्पादनहरू, शीट धातु लेजर काटन मिसिन, इस्पात लेजर काटन मिसिन
मोडेल संख्या: लेजर-3015-500 ड
रेटेड पावर: 220W
नाम: फैक्ट्री मूल्य सीएनसी फाइबर लेजर शीट धातु काटन मिसिन बिक्रीको लागि
काटन रेंज: 1500 * 3000 मिमी
प्रभावकारी कटन लम्बाइ Y अक्ष: तपाईको आवश्यकताहरूद्वारा विस्तार गर्न सकिन्छ
लेजर जनरेटर: Raycus
तालिका: इस्पात संरचना
लेजर सफ्टवेयर: CPYCUT
लेजर हेड: स्विट्जरल्याण्ड रेटोटोल
लेजर THC: साथ
वारंटी: एक वर्ष।
धातु PLATE1 को लागि सीएनसी फाइबर लेजर काटने मिसिन। राम्रो काम स्थिरता, उच्च आवृत्ति प्रभावी ढंग देखि प्लाज्मा, हल्का वजन पोर्टेबल 2। आर्थिक आर्थिक, संरचना र डिजाइन अनुबंध गरिएको छ। यो मानववादी सकारात्मक मानव-म्यानको कन्फिगरेशन स्वीकार्छ र सजिलै संग काम गर्दछ .3.Cutting छ उच्च गुणस्तर, उच्च प्रभाव स्तर, उच्च परिशुद्धता 4। रेखा र arc5.Dynamic र स्थिर ग्राफिक प्रदर्शन को लागी सजिलै संग सिक्नका लागि भागहरु। CAD फाइललाई कम्प्युटरमा प्रोग्राम फाइलमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ, USB फ्लैश ड्राइव ट्रांसमिस्टो मेसिनको माध्यमबाट सबै प्रकारका ग्राफहरू काट्ने। अनि पनि कार्यक्रम गर्न सक्छ र सीधा मेशिनमा सञ्चालन गर्न सक्छ .प्रेन्ड बिक्री हुनेछ र पछि बिक्री पछि सेवा ट्रयाक गर्नेछ
लेजर-3015-500W फाइबर सीएनसी लेजर काटन मिसिन
उपकरणको मुख्य प्राविधिक मापदण्ड
एक्स, वाई अक्षीय स्थिति निर्धारण
± 0.05mm / मिमी
एक्स, वाई एक्सियल दोहोरो स्थिति निर्धारण शुद्धता
± 0.03mm / मिमी
एक्स, वाई एक्सिएल प्रभावकारी काटन रेंज
अधिकतम ट्रान्स गति
80 मिनेट / मिनेट
हालको सर्वो विकल्प
बिजुली आपूर्ति / आवृत्ति दर
लेजर जेनरेटर (Raycus RFL-C500) विवरणहरू:
अधिकतम परिमार्जन आवृत्ति
ओप्टिकल फाइबर व्यास
निर्गत शक्ति स्थिरता
माप (डब्ल्यू * डी * एच)
ओक्सीजन ग्यास मैक्स 0.7 मेगा
प्रदर्शनी परिचालन फोटोहरू:
हामी कसरी छनौट गर्छौं?
1. हामी निर्माता र निर्यात गर्दै छन् सीएनसी काटने मिसिन7वर्ष मा, प्रक्रिया wholeshipping संग धेरै परिचित छ, यसैले धेरै जोखिम गुमाउन सक्छ।
2. एक्स्पेरियरिङ टेक्नोलोजी र गुणस्तर टीम, हाम्रो ईन्जिनियरहरूले 15 वर्ष भन्दा बढी कामका साथ अनुभवहरू स्थिर प्रदर्शन र उत्कृष्ट डिजाइन सुनिश्चित गर्नका लागि अनुभव गरिरहेका छन्। साथै हामी बिक्री पछि समस्या देखा पर्दा हामी सबै भन्दा राम्रो सोल-टोन दिन्छौं।
3. हामी हाम्रो मिसिनहरूको लागि मात्र उच्च गुणस्तर र प्रसिद्ध सामग्री भागहरू चयन गर्छौं।
4. त्वरित प्रतिक्रिया: हाम्रो ग्राहक सेवालाई पेशेवर र कुशल छ जसले तपाईंको प्रश्नहरू 12 घण्टा भित्र पस्न सक्छ।
5. वारंटी: बी / एल मुद्दा मितिबाट 1 वर्ष वारंटी, समय अवधिको अवधिमा यदि यो गल्ति असामान्य अपरेसन देखिन्छ भने, मरम्मत वा नि: शुल्क प्रतिस्थापित गरिनेछ।
केहि समस्याहरू तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ:
1. कुन सामग्री काटिने को लागी उपयुक्त छ? हाम्रो मिसिनले धातु प्लेट वा सर्कल पाइप काट्न सक्छ, हल्का स्टील, स्टील शीट र एल्युमियम जस्तै। यहाँ दुई कटाई, प्लाज्मा र ग्यास छन्।
2. कसरी सफ्टवेयर र सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने? सजिलो? यो सञ्चालन गर्न सजिलो छ, हामी तपाईंलाई आपरेशन म्यानुल र सफ्टवेयर म्यानुअल आपूर्ति गर्नेछौं, यसले तपाईंलाई कदमद्वारा कदम सिकाउनेछ। हामी पनि प्रत्येकलाई भिडीयो प्रदान गर्न सक्दछौं।
3. कसरी काम गर्ने क्रममा समस्या देखापर्यो? तपाईले मलाई मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ वा फोन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको समस्यालाई थाहा दिनुहोस् र केहि तस्विरहरू पठाउनुहोस् .हाम्रो ईन्जिनियरहरूले तपाईंलाई सोसलियनहरू प्रदान गर्नेछन्। यदि स्पेयर पार्ट्स चाहिन्छ भने, हामी पठाउनेछौं तपाईं निःशुल्क यदि 12 महिना वा एक वर्ष वारंटीको समय भित्र। यदि समस्या ठूलो छ भने, हामी अलसरी यदि हाम्रो इन्जिनियरिङलाई तपाइँको स्थानीयमा पठाउँछु भने।
500W 750W 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W धातु फाइबर लेजर काटने मिसिन
चीनको लेजर जनरेटरको साथ accurl लेजर काटने मिसिन
आईपीजी फाइबर लेजर काटने मिसिन 3000 * 1500 4000W
12kw फाइबर लेजर काटने मिसिन 3015 beckhoof सर्वो नियन्त्रक संग
पूर्ण बंद फूस परिवर्तक फाइबर लेजर पाइप र शीट धातु काटन मिसिन
500 वाट / 1000 वाट फाइबर लेजर काटने मिसिन प्रतिस्पर्धी मूल्य संग बिक्री को लागि
3000w लेजर काटन मिसिन मूल्य IPG 3kw फाइबर
धातु शीट 4000x2000mm को लागि स्टेनलेस स्टील फाइबर लेजर काटन मिसिन
raycus आईपीजी 500W स्टेनलेस धातु शीट सीएनसी फाइबर लेजर काटने मिसिन मूल्य